Maamulka magaalada oo Diyaar-garaw adag u galay Kor u Qaadida Bilicda Magaalada jigjiga. - Cakaara News
Maamulka magaalada oo Diyaar-garaw adag u galay Kor u Qaadida Bilicda Magaalada jigjiga.
jigjiga(Cakaaranews) Jimce Sept 13,2013.maanta ayaa ay magaalada jigjiga gaarahaan wadada wayn ee magaalada dhexmarta waxaa ka socotay dhirayn taasoo qayb ka ah kor u qaadida bilicda magaalada jigjiga iyo diyaargarawga xuska 8aad ee qowmiyadaha iyo shucuubta dalka.
hadaba mar uu wariyaha cakaara kula kulmay maareeyaha magaalada jigjiga mudane c/kariin cawil barkhadle iyadoo ay ku hawlan yihiin daraasaadka noocyada dhirta ubaxlayda ah ee ku haboon iyo beeristoodaba ayaa uu wax ka waydiiyay barnaamijka dhiraynta magaalada.
mudane c/kariin ayaa tibaaxay in xafiisku diyaargaraw adag ugu jiro martigalinta ergooyinka ka soo qaybgali doona xuska 8aad ee maalinta qowmiyadaha itoobiya hidar 29,islamarkaana guntiga u xidheen kor u qaadida bilicda iyo quruxda magaalada jigjiga dhanka Dhismayaasha noocyadiisa,wadooyinka,laydhadhka wadooyinka iyo Dhiraynta oo qayb wayn ka ah bilicda magaalada jigjiga. Masuulka ayaa intaa ku daray in noocyada Dhir-beerista maanta ka socotay magaalada jigjiga in ay yihiin Dhir aad tayo u leh oo isugu jirta noocyada ugu tayada fiican dhirta iyo ubaxyada lagu beero magaalooyinka kuwaasoo laga soo iibiyay hawasa.
mudane C/kariin ayaa sheegay ugu danbayntii in Dardar xoogan ay galiyeen Guud ahaanba kor uqaadida Bilicda,Quruxda iyo Nadaafada magaalada jigjiga kuna booriyay Shacabka 10ka xaafadood ee magaalada jigjiga iyo madaxda qabaleeyadaba in xooga la saaro sidii Qofkasta uu Gurigiisa hortiisa ugu beeri lahaa Geed,islamarkaana u ilaalin lahaa Nadaafada wajahada gurigiisa iyo agagaarkiisaba.